Crystal Photo Gallery - Elements sy Mineraly
Kilasin'ny singa, fitambarana, ary mineraly
Quartz crystals, karazana Amethyst, Virginia, Etazonia. Sary nalaina tamin'ny JMU Mineral Museum. Scientifica / Getty Images
Sary samihafa ny kristaly. Ny sasany dia kristaly azonao itomboina. Ny sasany dia sarin'ny kristaly amin'ny singa sy mineraly. Ny sary dia napetraka alfabeta. Ireo sary nofantenana dia mampiseho ny loko sy ny firafitry ny kristaly.
Almandine Garnet avy amin'ny haran-dranon'i Roxbury, konte Roxbury, Connecticut. John Cancalosi / Getty Images
Ny garnet Almandine, izay antsoina koa hoe carbuncle, dia ganika vy-aluminium. Ity karazana garnet ity dia matetika hita amin'ny loko mena lalina. Nampiasaina ny fanaovana kapaeritra sy rongony.
Boric asid (fotsy) ary Alum (mena) kristaly. De Agostini / Sary 1 / Getty Images
Alum (siramamy potassium aluminium) dia vondron'ireo chemicals mifandraika, izay azo ampiasaina haniry kristaly mazava, mena, na volomparasy. Ny kristaly ala dia anisan'ny vatosoa mora indrindra sy haingana indrindra azonao itomboanao .
Amethyst no anarana nomena ny loko volomparasy vita amin'ny quartz na gazy silikaly. Nikola Miljkovic / Getty Images
Ny amethyst dia kilaometrama volomparasy, izay dioksida silisy. Ny loko dia mety mivoaka avy amin'ny thiocyanate manganese na ferric.
Apatite crystal avy amin'ny Cerro de Mercado Mine, Victoria de Durango, Cerro de los Remedios, Durango, Mexico. Matteo Chinellato - ChinellatoPhoto / Getty Images
Apatite no anaran'ny vondron'ireo mineraly fosafasina. Ny loko marevaka indrindra amin'ny vatosoa dia manga-maitso, fa ny kristaly dia miseho amin'ny loko samihafa.
Fiakaran'ny aragonita. Jonathan Zander
Asbestos fibres (termolite) miaraka amin'ny muscovite, avy any Bernera, Inverness-shire, Angletera. Sary nalaina tao amin'ny Museum Natural History, Londres. Aramgutang, Wikipedia Commons
Azorita mineraly. Matteo Chinellato - ChinellatoPhoto / Getty Images
Azurite mampiseho kristaly manga.
Ireo dia kristaly manga amin'ny vatohara bitika bitika malaza antsoina hoe benitoite. Géry Parent
Angano kristaly emeralda (Beryl). Harry Taylor / Getty Images
Beryl dia beryllium aluminium cyclosilicate. Ny vatosoa vita amin'ny vatosoa dia antsoina araka ny loko. Green dia emeralda. Blue dia aquamarine. Pink dia morganite.
Bismuth dia metaly fotsy fotsy, miaraka amin'ny loko manga. Ny loko mangarangarin'io kristaly bismota io dia vokatry ny soritra manify eo amin'ny lohany. Dschwen, wikipedia.org
Ny singa miavaka dia mampiseho rafitra kristaly, anisan'izany ny bismuth metaly. Ity dia kristaly mora hitombo . Ny lokon'ny avana dia vokatry ny okididana mahamay.
Ity dia sarin'ny borax kristaly avy any Californie. Borax dia tetraborate ny natiora na tetraborate. Borax dia fotsy fotsy fotsy. Aramgutang, wikipedia.org
Borax dia borosy mineraly izay mamokatra kristaly fotsy na mazava. Ireo kristaly ireo dia mora atao ao an-trano ary azo ampiasaina amin'ny tetik'asa siantifika.
Borilana marefo ny Borax kristaly ary mora ny mitombo. Anne Helmenstine
Ny boron-damosin'ny boron-koditra dia mety ho levona ao anaty rano ary hamafisina mba hametraka kristaly mahavariana. Raha tianao, dia azonao atao ny mampitombo ny kristaly amin'ny fitaovam-pitaterana ranona mba hamolavolana endriky ny snowflake .
Breziliana misy moskovita
Kristiana breziliana miaraka amin'ny moskoa avy amin'ny araben'i Galilea, Minas Gerais, Brezila. Sary nalaina tao amin'ny Museum Natural History, Londres. Aramgutang, Wikipedia Commons
Ireo siramamy vita amin'ny siramamy vita amin'ny mason-java-manitra, ny endriny sira. Sanjay Acharya
Calcite amin'ny Quartz
Karazan'ny kôlitika kôlitika mareva-doko amin'ny quartz avy any Guanajuto, Meksika. Sary nalaina tao amin'ny Museum Natural History, Londres. Aramgutang, Wikipedia Commons
Ny kristaly kalsita dia karbonoma kalsioma (CaCO 3 ). Amin'ny ankapobeny dia fotsy sy mazava izy ireo ary azo zakaina amin'ny antsy
Ity dia santionany tena avo lenta amin'ny kristiana cesium izay mihazona ao anaty ampelipelana eo ambanin'ny atmosfera. Dnn87, Wikipedia Commons
Ity dia sarin'ny kristaly magnitudes amin'ny asidra asidra, nijery ny hazavana polarized. Jan Homann, Wikipedia Commons
Ny kômôma (SO 4 ) 2 ho an'ny molekla karbônika. Azonao atao ny mampitombo ny kristaly anao mora foana.
Ireo dia lehibe, manga voajanahary azo avy amin'ny solifara varahina. Stephanb, wikipedia.org
Mora ny mampitombo ny kristaly solifara vita amin'ny varahina. Ireo kristaly ireo dia malaza satria manga manga izy ireo, mety ho lasa be dia be, ary azo antoka ho azo antoka ho an'ny ankizy hitombo.
Ireo dia crocoite kristiana avy amin'ny Red Lead Mine, Tasmania, Aostralia. Crocoite dia mineraly chromate mitarika loharano monoclinika. Ny crocoite dia azo ampiasaina ho jiro karaoty, pigment loko. Eric Hunt, Creative Commons License
Diamondra diamondra miditra amin'ny vatolampy mainty. Gary Ombler / Getty Images
Ity diamondra sandoka ity dia kristaly karbaona.
Emerald, silicate minerale, beryl. Be3Al2 (SiO3) 6. Paul Starosta / Getty Images
Emerald no endrik'ilay vatosoa maitso vita amin'ny karazana mineraly.
Enargite kristaly amin'ny sombin'ny pyrite avy Butte, Montana. Eurico Zimbres
Epsom na sulfate crystals magnesium
Ny kristaly sulfate magnesium (miloko mavo). Copyright (c) nataon'i Dai Haruki. Zo rehetra voatokana. / Getty Images
Ny kristaly salsa Epsoma dia mazava ho azy fa afaka mamolavola mora foana. Io kristaly io dia mihamingana haingana avy amin'ny vahaolana mahatsiravina.
Ny fluorite na fluorspar dia isa mineraly misy volon-kazavana. Photolitherland, Wikipedia Commons
Fluorite na Crystals de fluorescents
Ireo dia ny kristaly fluorita aseho ao amin'ny National History Museum any Milan, Italia. Ny fluorite dia endriky ny kiran'ny ranon-tsolika mineraly. Giovanni Dall'Orto
Crystals Fullerene (Carbon)
Ireo dia kristaly feno karbônina. Ny singa kristaly tsirairay dia misy atôma 60 karbôna. Moebius1, Wikipedia Commons
Ny gallium Pure dia manana loko volomparasy mamirapiratra. Ny tebiteby ambany dia mahatonga ny kristaly ho maina. Foobar, wikipedia.org
Ohatra avy any Shina avy amin'ny kristaly garnet amin'ny quartz. Géry Parent
Ny singa metaly volamena indraindray dia miseho amin'ny endrika kristaly amin'ny natiora.
Halite na Rock Salt Crystals
Famaranana sira vatomamy na hila vato. DEA / ARCHIVIO B / Getty Images
Afaka maniry kristaly avy amin'ny ankamaroan'ny salady ianao , toy ny sira, sira, sira ary vato sira. Ny chlorida madio dia mamorona kisarisary tsara tarehy.
Heliodor crystal. DEA / A. RIZZI / Getty Images
Heliodor koa dia fantatra amin'ny anarana hoe beryla volamena.
Hot Ice or Crystals Acetate Sodium
Izy ireo dia kristaly misy ranomandry mafana na acetate sodium. Anne Helmenstine
Ny kristaly siramamy azota dia mahaliana ny mampitombo ny tenanao satria afaka manamboatra ny baiko avy amin'ny vahaolana manaloka.
Hoarfrost - Ice glasy
Ny kristaly mangatsiaka eo amin'ny varavarankely. Martin Ruegner / Getty Images
Ny endriky ny ririnina dia endrika rano mitovitovy, fa ny fanala kosa dia mitaky endrika hafa mahaliana.
Fiarovan-tena kristianina lehibe mihoatra ny 200x. Alfred Pasieka / Getty Images
Ireo no kristaly ny elanelana haloz, iodine. Jiro mateza dia volom-bolo manga mainty. Greenhorn1, sehatra ho an'ny daholobe
KDP na Potassium Dihydrogen Phosphate Crystal
Ity dia potassium dihydrogen phosphate (KDP) kristaly, milanja eo ho eo amin'ny 800 kilao. Ny kristaly dia tapaka ao anaty takelaka ampiasaina ao amin'ny Facility National Ignition, izay laser lehibe indrindra eran-tany. Lawrence Livermore National Security, LLNL, US DOE
Kyanite, silikaly. De Agostini / R. Appiani / Getty Images
Fiovan'ny ririnina - Ny halaviran'ny Nematic
Fiovan'ny toetran'ny Nematic ao anaty kristaly. Polimerek
Kritical Liquids - Fidaraboka
Ity sarinà kristaly lava-drano lava ity dia mampiseho ny c-phase smectic cc-crystal. Ny loko dia vokatry ny fametrahana ny kristaly eo ambanin'ny hazavana polarized. Minutemen, Wikipedia Commons
Ny kristaly dichrome potassium dia mitranga avy hatrany amin'ny lopezite mineraly tsy fahita firy. Grzegorz Framski, Creative Commons License
Ohatra amin'ny kristaly tsy manara-bodirindrina morganite, vatosoa mavokely amin'ny beryl. Ity karazana ity dia avy amin'ny toeram-pitrandrahana ivelan'i San Diego, CA. Trinite Minerals
Albumen kristaly, SEM. STEVE GSCHMEISSNER / SPL / Getty Images
Ny pyrite dia antsoina hoe "volamena adala" satria ny loko volamena sy ny lanjany avo dia mimika ny metaly sarobidy. Ny pyrite anefa dia vy, fa tsy volamena.
Quartz dia dioxide silicium, izay mineraly faran'izay betsaka ao amin'ny crust Earth. Raha mahazatra io kristaly io, dia azo atao koa ny mampitombo azy amin'ny lab .
Mineraly maina mena avy any Romania. Matteo Chinellato - ChinellatoPhoto / Getty Images
Realgar dia sulfida arsenika, AsS, vatosokay mena-koko.
Ny vatomamy rock dia mazava tsara raha tsy misy ny fanangonana sakafo. Claire Plumridge / Getty Images
Ny vatomamy rock dia anarana hafa amin'ny kristaly siramamy. Ny siramamy dia sucrose, na siramamy tabilao. Afaka maniry ireo kristaly ireo ianao ary mihinana azy ireo na mampiasa azy ireo mba hampandroana zava-pisotro.
Sugar Crystals (Manalokaloka)
Sary mampiavaka ny kristaly siramamy (sucrose). Ny faritra dia 800 x 500 micrometers. Jan Homann
Ruby no endrika koloina mena amin'ny vatan'ny mineraly. Melissa Carroll / Getty Images
Ruby no anarana nomena ny karazany mena amin'ny vatan'ny mineraly (oxide aluminium).
Voninkazo vita amin'ny rizile avy ao Bazil. Matteo Chinellato - ChinellatoPhoto / Getty Images
Rutile no endrika mampiavaka ny gazy titanika voajanahary. Ny kôdregasiôna voajanahary (rubis sy safira) dia ahitana ny fampidiran-dra.
Ny alimo sira (Chloride Sodium)
Ny kloro sodia dia manamboatra kilaometatra kilaometatra.
Spessartine na spessartite dia garneta aluminium manganina. Ity dia santatry ny kristaly grenady spessartine avy any amin'ny faritanin'i Fujian any Chine. Sakafo Noodle, Willems Miner Collection
Voahirana Kristiana eo ambanin'ny Electron Microscope
Sukrose kristaly, SEM. STEVE GSCHMEISSNER / Getty Images
Raha ampiroborobo ny kristaly siramamy ianao dia izao no hitanao. Azo jerena mazava tsara ny endriky ny tranokala kristaly monoklinika.
Quartz Sulphur. Matteo Chinellato - ChinellatoPhoto / Getty Images
Sulphur dia singa tsy metôlika izay mampitombo kristaly tsara tarehy manoloana ny lokony amin'ny jiro mavokely mitsatoka amin'ny volom-bolamena lava. Ity dia kristaly hafa azonao itombo ho anao.
Kitapo mena lehibe ao amin'ny Museum Natural History British Museum. Aramgutang, Wikipedia Commons
Topaz dia mineraly mangatsiaka hita amin'ny loko rehetra.
Topaz miaraka amin'ny endrika kanto tsara tarehy. Matteo Chinellato - ChinellatoPhoto / Getty Images
Topaz dia mineraly miaraka amin'ny ala simika Al 2 SiO 4 (F, OH) 2 ). Mampiavaka ny kristaly orthorhombic. Ny topaz madio dia mazava, fa ny fahalotoana dia afaka hamirapiratra azy samihafa loko.
Topy ny Halloween Chemistry Projects
Ahoana ny fomba fametrahana gazy na gazy mihomehy
Ahoana ny fomba hanamboarana gazela homemade
Fire Purple - Torolàlana mora ampiasaina amin'ny lelam-pototra
Sodôma amin'ny hetsika fanadiovana rano
Tokony hahazo MBA diplaoma ve aho?
Barack Obama's Certificate Birth
La Vache! - Nanazava ny fomba fiteny frantsay
NYU sy ny fanapahan-kevitra vao haingana
Triumph Bonneville Long Term Test - Tatitra # 1
Vovonan'ny Vanes sy Wind Socks: Decor and so much More
"Eleemosynary," Lalao iray manontolo nataon'i Lee Blessing
Tantaram-pianakaviana sy fomba fanoratana an'i Krav Maga
Fialofana mahazatra ho an'ny mpianatra amin'ny tsy fahasalamana
Raha teo amiko ny fiainana
Biography sy Profile of Chad Mendes
Carthage sy ny Fenisiana
Ny vola miditra sy vidin'ny elasticité ny fangatahana
Inona no atao hoe Chumash?
Hazavao ny format Gulf Am-Am
Toerana fialantsasatry ny Redfish any Northeast Florida